Naqshadeynta Ma Samatabixin Karto Mawduuca Fashilmay | Martech Zone
Naqshadeynta Ma Samatabixin Karto Mawduuca Fashilmay
Khamiista, Noofembar 13, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Taasi waa xigasho fantastik ah oo ka timid Edward R. Tufte, oo ah qoraaga Muuqaalka Muuqaalka Macluumaadka Tirada, ee ku yaal boggan macluumaadka ka socda OneSpot.
Ku dhowaad maalin kasta, waxaan dhignay infographic si aan ugu daabacno dhagaystayaasheena. Waxaan dib u eegeynaa mid walboo waxaan raadineynaa waxyaabo aasaasi ah:
Naqshad qurux badan, naqshad hodan ah.
Sheeko xiiso leh iyo / ama talo ficil ah.
Inta badan macluumaadka qormooyinka aan diidno waa qoraallo si fudud loogu qoro qolalka oo qof ku duubay naqshad qurux badan. Infographics maahan sawir qurxoon. Waa inay noqdaan muuqaal muuqaal ah oo macluumaad aan si fudud loogu sharixi karin qoraalka. Mawduuca ama sheekada ka dambeysa qaab-hawleedku waa inuu si taxaddar leh u sawiraa sawir ka caawinaya kormeeraha inuu fahmo oo haysto macluumaadka aad siineyso. Waxyaabaha xogta laga helaana waa inay taageeraan sheekada aad bixinayso - taasoo ka dhigaysa goobjoogaha inuu fahmo saamaynta dhibaatada iyo / ama xalka.
Waad ku mahadsan tahay guusha epic ee Pinterest iyo Instagram, shabakadda muuqaalka ayaa noqotay aalad awood leh oo lagama maarmaan u ah suuqleyda waxyaabaha ka kooban. Eeg sababta maskaxdeennu u jecelyihiin sawirrada oo ay u ogaadaan aalado waxtar leh oo kugu hagaya adiga oo ku abuuraya waxyaabo muuqaal qurxoon oo duulimaad ah iyadoon koox naqshadeeyayaal ah iyo agaasimayaasha farshaxanka ay kaa dambeeyaan. Erica Boynton, OneSpot
Infographic-ku wuxuu ku dhex maraa suuq-galiyaha waxyaabaha uu ka kooban yahay xeeladaha kala duwan - sida sawirrada, qaab qorista, jaantusyada iyo garaafyada, midabka, astaamaha, astaamaha, fiidyowyada iyo sawir-gacmeedka - kuwaas oo gacan ka geysanaya sidii aragga loogu baahin lahaa sheekada aad sheegeyso. Waxayna siiyaan macluumaadka taageeraya!
Maxay Tahay Inaad Ku Socoto Si Aad Ujebiso Yoolalkaaga Beddelka
Sidee Loo Shidaal Siiyaa Waxyaabaha Bulshadu Ka Koobantahay